Fil d'actualités du 19/07/2019
19/07/2019 - 16:00 : TOETRANDRO:Hidina be ny maripana ka hanakaiky ny 0°C ny 21 - 23 Jolay 2019. Any vakinankaratra sy ny faritry ny afovoantany no ahitana izany. Voalazan'ny météo fa tamin'ny taona 2013 no nahitana tranga toy izao farany.
19/07/2019 - 15:45 : LOZAM-PIFAMOIVOIZANA:Fiara sprinter iray no nivarina tany antanimbary anio maraina,maty tsy trahadrano ilay sofera ary mpandeha maromaro no naratra.
19/07/2019 - 15:30 : Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny Canal Olympia trano fijerevana oronan-tsary vaovao etsy amin'ny village voir Andotapenaka.
19/07/2019 - 15:00 : FIAINAM-PIRENENA:Anio amin'ny 3 ora sy sasany tolak'andro ny fanendrena praiminisitra vaovao eny amin'ny lapan'Iavoloha.ho entina miandalana eto ihany ny tohin'ny vaovao.
19/07/2019 - 14:30 : LALAO NY NOSY:Anio no nisokatra ny lalao ny nosy andiany faha 10 izay notanterahina atsy amin'ny nosy Maurice.
19/07/2019 - 14:00 : CAN 2019:Andefa mivantana ny lalao famarana fiadina ho tompondaka ny Afrika ny kaominina Sabotsy Namehana.
19/07/2019 - 11:00 : ASA TAGNAMARO:Rahampitso ny andihany faha 5 amin'ny asa tanamaro izay haton'ireo minisitera maro mùanerana ny Nosy.
19/07/2019 - 10:30 : CAN 2019 :Anio ny famaranana ny fiadihana ny CAN 2019 izay ihaonan'i Algerie sy Sénégal.
19/07/2019 - 10:00 : MPAMONJY VOINA:Feno 70 taona anio ny mpamonjy voina ka hisy ny vondrombavaka iraisam-pinoana izay ho tanterahina eny amin'ny chapelle eny Amparibe.
19/07/2019 - 09:30 : FAMINDRAM-PAHEFANA:Anio ny famindram-pahefana eo anivon'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena.
Archive du 20180219
Tsy milamina ny tany Bala 10 900 isa sarona teny Analakely
Balana basy “calibre 7.5mm” miisa 10 900 tao anatina vata vy miisa 8 no hita tamina trano lehibe iray teny Analakely ny zoma 16 febroary lasa teo.
Andry Rajoelina Ny omaly tsy niova
Nandritra izay 4 taona izay, dia tsy nisy andro na dia iray aza tsy nieritreretako ny Malagasy sy i Madagasikara, hoy i Andry Rajoelina nandritra ny fampahafantarana an’ilay IEM (Initiative pour l’Emergence de Madagascar) tamin’ny fahitalavitra TV Plus sy Kolo TV halina.
Fifidianana filoham-pirenena Mety hahemotra amin’ny mey 2019…
Tsy misy tokotaniny hatramin’izao ny resaka fanatanterahana ny fifidianana amin’ity taona ity, ka mivoaka mihitsy ny resaka fa hahemotra any amin’ny volana mey 2019. Tsy sahin’ny fitondrana ny mamoaka ny daty mazava na efa hatry ny ela aza ny vaomiera mahaleotena mikarakara ny fifidianana na ny CENI no nangataka izany.
Ravalomanana sy ny ekipany Asa fa tsy teoria
Akaiky ny fifidianana ary efa samy hita ho miomana amin’izany daholo, indrindra ireo kandida sy antoko heverina ho goavana.
Claudine Razaimamonjy Izay vao tena taraiky
Efa tena iatahan’ny HVM i Claudine Razaimamonjy raha dinihina amin’ny zava-niseho tato ho ato, ka anisan’ireo voatonona ho tsy mankasitraka ny fiarovana azy intsony i Voahangy Rajaonarimampianina vadin’ny filoha.
Lisi-pifidianana Eo am-panadiovana ireo anarana miverimberina ny CENI
Eo am-panadiovana ireo anarana miverimberina na “dedoublonnage” ny CENI amin`izao fotoana ary mijery raha misy olona efa maty nefa mbola voasoratra ihany.
Pasitera Mailhol “Hahita raharaha izay hihaona amiko amin’ny 2ème tour”
Tsy mihemotra ary tsy miverina intsony ilay maha kandidà ahy amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena ho avy amin’ity 2018 ity, hoy ny pasitera Mailhol mpitarika ny fiangonana Apokalypsy, raha nanontanian’ny mpanao gazety ny tenany omaly teny Antanimena.
Riana Andriamandavy VII Tsy dia mafana fo amin’ny HVM intsony
10 taona lasa izay ! Nafana fo teo anivon’ny tanoran’ny antoko Tiako I Madagasikara teo anilan-dry Mamy Mamonjy Raharinavalona, izay mbola TIM hatramin’izao, sy Vy Vato Rakotovao (lasa Mapar) mihitsy izany Riana Andriamandavy VII izany.
Nikodia ny Vato be Olona 7 no maty teny Ampamarinana
Loza amin’atambo no nitranga teny Ampamarinana ny sabotsy alina teo, olona 7 no namoy ny ainy, 8 naratra mafy.
Loza teny Ampamarinana Niasa andro aman’alina tamin’ny famonjena ny CUA
Nandray an-tanana ny fikarakarana ny razan’izy 7 mianaka maty noho ny firodanan’ilay vatobe teny Ampamarinana ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) teo ambany fitarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy eny amin’ ny boriborintany faha-4 notarihan’ny depiote Depiote Felix Randriamandimbisoa sy ny delege Solofo nanomboka tamin’ny fisokirana ny razana, ny fitondrana azy ireo teny amin’ny hopitaly.
Kaominina Andoharanofotsy Hohatsaraina ny lafin’ny fampianarana
Hohatsaraina tanteraka ny lafin’ny fampianarana manerana ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana miisa 70 ao anatin’ny ZAP-n’Andoharanofotsy. Lohalaharana amin’izany ny fanamafisana orina ny pedagojia toy ny fitsipi-pifehezana,
Tsipy kantibe – Tompondakan’i Madagasikara dingana 1 Nanao poa-droa ny ekipan’ny BIC Ambohimahasoa
Tontosa omaly alahady 18 febroary 2018 tetsy amin’ny « boulodrome » CBT Mahamasina ireo lalao famaranana lahy sy vavy olon-droa miaraka amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara taranja tsipy kanetibe 2018 dingana 1.
Basket « coupe du Président » andiany faha-4 Ny BCA Ihorombe no nitana ny laharana voalohany
Ny BCA Ihorombe nandresy ny JBC Atsimo Andrefana (65-55) teo amin’ny lalao famaranana notontosaina omaly alahady 18 febroary 2018 no nitana ny laharana voalohany tamin’ny fifanintsanana ho an’ny « Zone Sud ». Izy roa ireo, araka izany, no hisolotena an’io Faritra io amin'ny tohin'ny fifaninanana PLAY OFFS izay atao any Toliara (LRBB Atsimo Andrefana).
Ndrao hakanosana !
Zava-dehibe ho an’ny hoavin’ny firenena izay filoham-pirenena vaovao ho lany eo amin’ity taona ity.
Centre Chrétien de la Santé Mamolavola mpitsabo matahotra an’Andriamanitra
Mankalaza ny faha-50 taona nijoroany ny « Centre Chretien de la Santé » etsy Ambohidahy. Ny Sabotsy teo no nanokafana tamim-pomba ôfisialy ny fankalazana ka fantatra tamin’izany fa efa mahatratra 600 ankehitriny ireo mpikambana manerana ny Nosy raha 60 tamin’ny taona 1968 nisokafan’ny sekoly voalohany.
Tsy fandriampahalemana Mirongatra be, hoy ny Seces
Tafahoatra ny tsy fandriampahalemana amin’ny lafiny rehetra eto amin’ny firenena, raha ny fanambarana nataon’ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sampana Antananarivo taorian’ny fidinana ifotony nataon’izy ireo amin’ny maha vato nasondrotry ny tany azy.
Tenis Atp tany Rotterdam
Lasa laharana voalohany eran-tany indray i Roger Federer taorian’ny nandreseny an’i Grigor Dimitrov (6-2, 6-2) tamin’ny famaranana ny « tournoi ATP Rotterdam » notontosaina omaly alahady 18 febroary 2018. Fandresena faha-97 azon’ny lehilahy nandritra ny nilalaovany tenisy avo lenta ity azony ity.
Frantsa Raikitra ny adin’ny TF1 sy ORANGE
Miezaka mandamin-dresaka momba ny fifandirany amin’ny orinasam-pifandraisana Orange Atoa Gilles Pélisson, filoha tale jeneralin’ny fahitalavitra TF1.
AIRTEL Nanampy ireo ankizy lasibatry ny homamiadana
Telo volana no kely indrindra amin’ireo ankizy lasibatry ny aretina homamiadana eto amintsika. Amin’ny ankapobeny dia ny homamiadan’ny rà, ny maso ary ny tsinay no tena mahazo azy ireny noho ireo antony maro samihafa.